Thenga abalandeli kwi-Instagram [IIMBONO] ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Thenga abalandeli kwi-Instagram [OPINIONS]
Disemba 12, 2018 0 IiCententarios 1029
Ukuba uthetha nge-Instagram kufuneka ucace gca eyona nto ibalulekileyo linani labalandeli. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nenani labasebenzisi ababonayo kupapasho ngalunye. Kwaye, ewe, indlela abanxibelelana ngayo nabo ngokuthanda okanye izimvo apho banokuthi baveze uluvo lwabo malunga nefoto okanye ividiyo elayishiwe. Zininzi izimvo malunga nendlela yokuthenga abalandeli kwi-Instagram ukuze babandakanyeke ngakumbi.
I-Instagram isekwe kuzo zonke ezi zinto zingasentla. Umfanekiso ngumbonisi omkhulu. Kwaye kuzo zonke ezi zizathu iindlela zokuchaza yandisa inani labalandeli onayo Oku kuyakuphumeza ukufikelela okuphezulu kunye neempapasho ezenziweyo.
Ungathenga abalandeli kwi-Instagram kwaye kukho izimvo ngayo. Ngapha koko kukho inani elikhulu lamaphepha kwi-Intanethi apho unakho Fumana abalandeli abaninzi kunye nokuthandayo kwimifanekiso efakwe kwinethiwekhi yokutshintshiselana ngentlawulo ethile okanye inokufumaneka simahla.
Zonke izicelo zokuthenga zilula ukuzisebenzisa. Bayakuvumela ukwenza intlawulo ngePayPal, ngekhadi le-VISA okanye ngeakhadi leKhadi.
kunjalo, I-Instagram itshintshe i-algorithm yayo kunye nokunciphisa ukufikelela kwe-organic yesithuba ngasinye. Okwangoku ifikelela kwiipesenti ezili-10 ze- abalandeli bebonke ebalwa ngayo. Ke ngoko, yi-1 kuphela yabasebenzisi nganye ye-10 elandela iakhawunti eya kubona iimpapasho zabo ngokuzenzekelayo. Ngokufanayo, i-Instagram inokuvala i-akhawunti.
Kwelinye icala, ukwandisa inani labalandeli, ukongeza kwi Thenga abalandeli kwi-InstagramKukho ezinye izicelo ezinokuba luncedo kakhulu. Kuyaziwa ukuba ii-hashtag kwi-Instagram kubaluleke kakhulu ukuhlela imifanekiso ngemixholo. Bayabavumela ukuba bafumaneke ngokulula abanye abasebenzisi. Isixhobo IiHashTag zikuvumela ukuba ufumanise ngqo ii-hashtag ezizihloko ezithile nokuba zisetyenziswe ukuze iimpapasho zifikelele inani elikhulu labantu.
Ngale app ungacima bonke abalandeli abangasebenziyo onayo. Ngale ndlela, umda weempapasho ezenziweyo uya kwandiswa, abasebenzisi abaninzi banokufikelelwa kwaye kukho abalandeli abasemgangathweni abanyulu. Unako kwakhona Thenga abalandeli abaziinxalenye.
Elinye icebo eliluncedo yiLizwi Swag. Kwaye kunye naye Unokufumana izicatshulwa ezikhangayo ezitsala umdla kwimifanekiso ekwabelwana ngayo nge-Instagram. Ungalibali ukuba upapasho olusemgangathweni luya kutsala abasebenzisi abaninzi. Oku kuya kubangela ukwanda kwabalandeli.
Ngaphandle kokwazi ukufumana abalandeli kunye nezi zicelo, kukho enye indlela kwaye iyintengiso. Ngeentengiso ze-Instagram utyalomali lwenziwe apho inani labalandeli linganyuka. Umzekelo, umbono olungileyo ukukhuthaza upapasho oluphumelele kakhulu okanye ukubhengeza iprofayili ngokwayo ukuze abantu bayazi kwaye bathathe isigqibo sokuyilandela.
Sikubonise ukuba wenza njani Dibanisa i-Instagram kwiphepha le-Facebook.
1 Fumana abalandeli
1.2 Ukucoca i-Instagram
1.3 I Swag
1.4 Iintengiso ze-Instagram
Disemba 12, 2018
Ungabathenga njani abalandeli kwi-Instagram ngePaypal okanye ngekhadi letyala